विद्यार्थीका लागि रोजगार आजको आवश्यकता | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १८:४२ लेखक nepali janta
केहीले बल्लतल्ल home tution पढाएर घर भाडाको जोहो गर्छन् । केहीले job कै लागि क्याम्पसको कक्षालाई माया मारेका छन् । विद्यार्थीको कोठामा टेवल या सुत्ने खाट समेत हुदैन। सबै कहाँ खाटमा सुत्छन् र ? धेरै विद्यार्थीको ओछ्यान सामान्यत भुइँमा एक सरो डस्ना हुन्छ । यो तितो यथार्थ हो ।
आर्थिक कारणले नै बरु जग्गा धितो राखेर भएनि अष्ट्रेलिया भासिनेको संख्या बढ्दो छ । बिचमै पढाइ छोडेर खाडीको लागि पासपोर्ट बनाएका कुरा गरिराख्नु नपर्ला । अब के गर्ने त ?
मलाई के लाग्छ भने अब हामी विद्यार्थीहरुले शिक्षा सहित रोजगारको विषय उठाउन जरुरी छ अर्थात पढाइ सगसगै Part time job । यो विषय सुन्दा , अष्ट्रेलियाको देखासिकि भन्ने लाग्ला जुन अति आवश्यक पनि छ । अलिकति रिक्स छ तर असम्भव नै भने छैन। सरकार र व्यवसायीसंग सम्झौता हुने हो र विद्यार्थीलाई आफूले गरेको कामको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था हुने हो भने हजारौं विद्यार्थी आर्थिक अभाव कै कारण आफ्नो शिक्षा +2 मा नै सिमित गर्न बाध्य हुनेछैनन् । यो केवल काठमाडौं बाहिरका दुर्गमबाट आउने विद्यार्थीका हकमा मात्रै नभई , काठमाडौं कै विद्यार्थीहरुका लागि पनि फलदायी हुनेछ ।
तपाई आफै सोच्नुहोस् उमेरले २२-२४ वर्ष पुगेका विद्यार्थीहरुले बा-आमासँग कहिले सम्म पाकेट खर्च माग्ने त ? फुर्सदको समयमा काम किन नगर्ने ? काठमाडौंबाट नै सुरु गर्ने हो भने यहाँ सम्भावनाका आयमहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । ठमेल , पाटन , भक्तपुर , बौद्ध , पशुपति , स्वयम्भू लगायतका प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरुले पनि सम्भावनाका दायराहरुलाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ। यहाँ स्थित विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका एनजीओ , आइएनजीओ , व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन भएका रेस्टुरेन्ट ,होटल , ट्राभल एजेन्सि , आदिमा विद्यार्थीहरुलाई लक्ष्यित गरेर Part time job को व्यवस्था गर्न हो भने विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनमा आर्थिक टेवा पुग्नेछ । तर Part time Job गरिरहँदा , कक्षामा हाजिरी र क्याम्पसको अनुगमन भने अनिवार्य हुन आवश्यक देखिन्छ । नभए विद्यार्थी शिक्षा भन्दा पनि पैसा तिर बढी आकर्षित हुनसक्छन् । विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि पहुँच होस् र केही गर्न सक्छौ भन्ने प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने धारणा हो तर विद्यार्थी जीवनकालमै पूर्ण व्यवसायीक नै हुनुपर्छ भन्ने निचोड होइन ।
अब हामीले अघि बढ्नै पर्छ । यो अरु ग्रहमा जाने घोषणा होइन न त नेपाल हल्लाउने भुइचालो नै । सुरुमा व्यवहारीक रुपमा कार्यनयन गर्न अलिक असहज वा गाह्रो होला तर असम्भव भने कदम कदाचित छैन । यो हजारौं विद्यार्थीहरुको आवश्यकता हो जो नेपालको कुनाकाप्चाबाट हजारौंको संख्यामा वर्षैपिच्छे आशा लाग्दो सपना लिएर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं भित्रीरहेका हुन्छन् । जसले जिउँदो सपनाका लागि हरेक पाइलमा कम्पर्माईज मिसिएको संघर्षका गासहरु खाइरहेका छन् ।
यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो अब सबै विद्यार्थी साथीहरू सचेत भई सम्बन्धि निकायमा अपिल गर्नुको साथै बुदामा मात्र सिमित हुन नदिई गम्भीरताका साथ यश विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ । सुझाव सल्लाहको अपेक्षा ।
बाताबरण विज्ञानका विद्यार्थी न्यौपाने अनेरास्ववियु अस्कलका विद्यार्थी नेता समेत हुन् ।
६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, को कहाँ पुगे ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयद्वारा ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार केही जिल्लाका प्रमुख…
‘शीतगंगा’को ढेड करोड बजेट जनप्रतिनिधिकै पोल्टामा
काठमाडाैं । भौगोलिक हिसाबले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो अर्घाखाँचीको शीतगंगा । सखुवाको भण्डार, प्रशस्त खोलानालाजस्ता प्राकृतिक सम्पदाका कारण…
मानव तस्करीमा संलग्नताबारे सोधपुछका लागि राजदूत लक्कीलार्इ स्वयं उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडाैँ । अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत लक्की शेर्पा स्वदेश फर्किदै छिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतका विषयमा आरोप आउन थालेपछि सोधपुछका…
काठमाडौं । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली चेली र समग्र नेपाली महिलाको अस्मिता माथि नै ठेस पुग्ने…